Fa Wo Koma Si Nea Wɔakyerɛw no So | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mongolian Moore Motu Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
‘Wɔakyerɛw eyinom de rebɔ yɛn a wiase nhyehyɛe yi awiei ato yɛn no kɔkɔ.’​—1 KOR. 10:11.
NNWOM: 11, 61
DƐN NA WUBETUMI ASUA AFI MFOMSO AHOROW A AHENE A WƆN DIN DIDI SO YI DII NO MU?
Asa ne Yehosafat
1, 2. Adɛn nti na yɛrebesusuw nea Yuda ahene baanan no yɛe no ho?
SƐ OBI nam ɔkwan bi so na wuhu sɛ wawatiriw ahwe ase na wo nso worekɔfa ɔkwan koro no ara so a, worenhwɛ wo ho yiye anaa? Sɛ yesusuw mfomso ahorow a afoforo dii ho a, ebetumi aboa yɛn na yɛanni mfomso koro no ara bi. Saa ara nso na ɛte wɔ Onyankopɔn som mu. Yebetumi asua nneɛma bi a mfaso wɔ so afi mfomso ahorow a nnipa bi dii mu. Wɔaka saa mfomso no bi ho asɛm wɔ Bible mu.
2 Yuda ahene baanan a yɛaka wɔn ho asɛm wɔ adesua a edi wei anim mu no de koma a edi mũ na ɛsom Yehowa. Nanso, wodii mfomso ahorow bi a emu yɛ duru. Dɛn na yebetumi asua afi wɔn asɛm no mu? Dɛn na yɛbɛyɛ na yɛn nso yɛanni mfomso a ɛte saa? Sɛ yedwinnwen nea ɛtoo wɔn no ho a, ebetumi aboa yɛn ama yɛanya nea wɔakyerɛw ato hɔ ama yɛn nkyerɛkyerɛ no so mfaso.​—Kenkan Romafo 15:4.
SƐ YƐDE YƐN HO TO NNIPA NYANSA SO A, ƐRENSI YƐN YIYE
3-5. (a) Ɛwom sɛ na Asa koma di mũ wɔ Yehowa ho de, nanso ɔhaw bɛn na ohyiae? (b) Bere a Baasa baa Yuda so no, ɛbɛyɛ sɛ dɛn nti na Asa de ne ho too nnipa so?
3 Momma yenni kan nsusuw Asa ho, na yɛnhwɛ sɛnea Onyankopɔn Asɛm no betumi akyerɛ yɛn kwan wɔ yɛn asetena mu. Bere a Etiopiafo ɔpepem baako baa Yuda so no, Asa de ne ho too Yehowa so. Nanso bere a Israel hene Baasa fii ase sɛ ɔrekyekye Rama, kurow bi a ɛda Israel ne Yuda hye so no, Asa amfa ne ho anto Yehowa so. (2 Be. 16:1-3) Bere a Baasa yɛe sɛ ɔne Asa bɛko no, Asa de ne ho too ɔno ankasa nyansa so, na ɔkɔmaa Ɔhene Ben-Hadad a ofi Siria sika sɛ ɔmmɛtow nhyɛ Baasa so. Gyinae a Asa sii no kɔɔ yiye anaa? Bible bɔ amanneɛ sɛ: “Baasa tee no, ntɛm ara na ogyaee Rama kyekye, na otwaa adwuma a ɔreyɛ no so.” (2 Be. 16:5) Sɛ wohwɛ asɛm no ani so a, ɛbɛyɛ wo sɛ gyinae a Asa sii no kɔɔ yiye!
4 Nanso, Yehowa huu gyinae a Asa sii no sɛn? Onyankopɔn somaa ne kasamafo Hanani sɛ ɔnkɔka Asa anim sɛ wamfa ne ho anto Yehowa so. (Kenkan 2 Beresosɛm 16:7-9.) Hanani kae sɛ: “Efi nnɛ rekɔ, akodi bɛba wo so.” Ɛwom sɛ Baasa san n’akyi de, nanso Asa ne ne nkurɔfo dii ako pii wɔ n’ahenni no nna a aka nyinaa mu.
5 Sɛnea yehui wɔ adesua a edi wei anim no, Onyankopɔn hwehwɛɛ Asa koma mu, na ohui sɛ Asa de koma a edi mũ na ɛsom no. (1 Ahe. 15:14) Onyankopɔn ani so de, na ɔsom a Asa de ma no no di mũ, na na ɛsɔ n’ani. Nanso, Asa twaa gyinae bɔne a osii no so aba. Bere a Baasa baa Asa so no, Asa de ne ho too Ben-Hadad ne ɔno ankasa so. Adɛn nti na Asa amfa ne ho anto Yehowa so, na mmom ɔde ne ho too nnipa so? Ebetumi aba sɛ n’adwene yɛɛ no sɛ mmoa a ɔbɛhwehwɛ afi aman foforo hɔ anaa akodi mu nyansakwan bi a ɔbɛfa so no bɛboa no asen sɛ obesu afrɛ Onyankopɔn ahwehwɛ mmoa anaa? Anaa ɛbɛyɛ sɛ afotu bɔne bi na ɛma onyaa adwene a ɛte saa?
6. Dɛn na yebetumi asua afi mfomso a Asa dii no mu? Ma ɛho nhwɛso.
6 So Asa asɛm yi bɛka yɛn ama yɛahwehwɛ yɛn ankasa nneyɛe mu? Sɛ yehyia ɔhaw ahorow bi a yɛn ani so no ɛyɛ yɛn sɛ ɛsõ kyɛn yɛn a, ebia ɛrenyɛ den sɛ yɛde yɛn ho bɛto Yehowa so. Nanso, dɛn na yɛyɛ wɔ nsɛm nketenkete a yehyia wɔ yɛn asetenam da biara da no ho? Ɛyɛ a yɛde yɛn ho to nnipa nyansa so, na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛfa yɛn ankasa kwan so atoto nneɛma anaa? Anaasɛ ɛyɛ a yɛhwehwɛ Bible nnyinasosɛm, na yɛbɔ mmɔden sɛ yɛde bɛyɛ adwuma? Sɛ yɛyɛ saa a, na ɛkyerɛ sɛ Yehowa kwan na yɛfa so siesie ɔhaw ahorow a yehyia. Nhwɛso bi ni. Ebia w’abusuafo bɛsɔre atia wo sɛ wɔremma wonkɔ asafo nhyiam anaa ɔmansin nhyiam bi. Enti wobɔ Yehowa mpae sɛ ɔnkyerɛ wo kwan na ɔmmoa wo mma wunhu ɔkwampa a wobɛfa so adi ɔhaw no ho dwuma. Anaa yɛmfa no sɛ w’adwuma afi wo nsa, na ɛyɛ den sɛ wubenya adwuma foforo ayɛ. Sɛ wo ne adwumawura bi a obetumi afa wo wɔ n’adwumam reka adwuma ho asɛm a, wobɛka akyerɛ no sɛ wobɛkɔ asafo nhyiam a yɛyɛ no nnawɔtwe no mu no daa? Sɛnea ɔhaw no te biara, ɛyɛ papa sɛ yetie odwontofo no asɛm a ɔkae no. Ɔkae sɛ: “Fa wo kwan hyɛ Yehowa nsa, na fa wo ho to no so, na ɔno na ɔbɛyɛ.”​—Dw. 37:5.
DƐN NA FEKUBƆNE BETUMI AMA ATO WO?
7, 8. Mfomso ahorow bɛn na Yehosafat dii, na dɛn na efii mu bae? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
7 Asa babarima Yehosafat nso ɛ? Ná ɔwɔ suban pa pii. Esiane sɛ Yehosafat de ne ho too Onyankopɔn so nti, ɔyɛɛ nneɛma pa pii. Ne nyinaa akyi no, ɔno nso sisii gyinae a nyansa nnim. Sɛ nhwɛso no, ɔne Ɔhene Ahab a na ɔyɛ atifi fam ahemman no hene a na ɔyɛ ɔbɔnefo no dii ayeware. Bere foforo nso, ɛmfa ho sɛ odiyifo Mikaia bɔɔ Yehosafat kɔkɔ no, Yehosafat ne Ahab boom kɔko tiaa Siriafo. Ɔko no mu no, anka wɔreyɛ akum Yehosafat. Ɛno akyi no, Yehosafat san kɔɔ Yerusalem. (2 Be. 18:1-32) Bere a Yehosafat duu Yerusalem no, odiyifo Yehu bisaa no sɛ: “Nnebɔneyɛfo na woboa wɔn, na wɔn a wɔtan Yehowa na ɛsɛ sɛ wodɔ wɔn anaa?”​—Kenkan 2 Beresosɛm 19:1-3.
8 Yehosafat suaa biribi fii saa asɛm yi mu anaa? Ɛwom sɛ Yehosafat kɔɔ so de nsi ne ahokeka som Onyankopɔn, na na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nea ɛsɔ n’ani de, nanso ɛte sɛ nea wansua biribi amfi ɔne Ahab asɛm no ne kɔkɔbɔ a Yehu de maa no no mu. Yehosafat san de ne ho kɔhyɛɛ fekubɔne bi mu. Ɔde ne ho kɔbɔɔ Onyankopɔn tamfo bi. Saa bere yi de, ɔde ne ho kɔbɔɔ Ahab ba Ɔhene Ahasia a na ɔyɛ ɔbɔnefo no. Yehosafat ne Ahasia bɔɔ mu yeyɛɛ po so ahyɛn. Ahyɛn no sɛesɛee, na wɔantumi amfa ahyɛn no anyɛ nea na wɔpɛ sɛ wɔde yɛ no.​—2 Be. 20:35-37.
9. Dɛn na fekubɔne betumi ama ato yɛn wɔ yɛn asetena mu?
9 Sɛ yɛkenkan Yehosafat ho nsɛm a, ɛsɛ sɛ ɛkanyan yɛn ma yɛhwehwɛ yɛn ankasa asetena mu. Adɛn ntia? Sɛ yɛbɛka a, na Yehosafat yɛ ɔhene pa. Ɔyɛɛ nea ɛteɛ, na “ɔde koma mũ hwehwɛɛ Yehowa.” (2 Be. 22:9) Nanso wei nyinaa akyi no, fekubɔne de ɔhaw baa ne so. Momma yɛnkae ɛbɛ bi a Onyankopɔn honhom ma wobui yi. Ɛka sɛ: “Nea ɔne anyansafo nantew no bɛyɛ onyansafo, na nea ɔne nkwasea bɔ no, ebewie no bɔne.” (Mmeb. 13:20) Ɛwom, ebia yɛrebɔ mmɔden sɛ yɛbɛboa wɔn a wɔakyerɛ asɛmpa no ho anigye ama wɔaba nokware no mu. Nanso, esiane sɛ Yehosafat de ne ho kɔbɔɔ Ahab wɔ ɔkwan a ɛmfata so nti, anka ɔreyɛ ahwere ne nkwa. Saa ara na asiane wom sɛ yɛne wɔn a wɔnsom Yehowa bɛbɔ wɔ ɔkwan a ɛmfata so. Sɛ yɛyɛ saa a, asɛm betumi ato yɛn.
10. (a) Sɛ yɛpɛ sɛ yɛware a, dɛn na yebetumi asua afi Yehosafat asɛm no mu? (b) Sɛ yehyia fekubɔne ho sɔhwɛ a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛkae?
10 Dɛn na yebetumi asua afi Yehosafat asɛm yi mu? Kristoni bi betumi afi ase anya obi a ɔnnɔ Yehowa ho anigye sɛ ɔbɛware no. Ebia n’adwene ne sɛ onnya ɔhokafo a ɔfata wɔ nokware Kristofo mu. Anaasɛ ebia Kristoni bi bɛte nka sɛ n’abusuafo a wɔnyɛ Yehowa Adansefo rehyɛ no sɛ ɔnware ‘ansa na aka akyi dodo.’ Afei nso, ebinom betumi ate nka te sɛ onuawa yi. Onuawa no kae sɛ: “Yɛn nyinaa pɛ sɛ yɛdɔ afoforo na wɔn nso dɔ yɛn bi.” Sɛ saa na ɛte a, ɛnde dɛn na ɛsɛ sɛ Kristoni yɛ? Sɛ yedwinnwen nea ɛtoo Yehosafat no ho a, ɛbɛboa yɛn. Ná ɔtaa hwehwɛ akwankyerɛ fi Onyankopɔn hɔ. (2 Be. 18:4-6) Nanso, bere a Yehosafat de ne ho kɔbɔɔ Ahab a na ɔnnɔ Yehowa no, dɛn na ɛtoo no? Ná anka ɛsɛ sɛ Yehosafat kae sɛ, Yehowa aniwa rehwehwɛ wɔn a wɔn koma di mũ wɔ ne ho. Ɛnnɛ nso, Onyankopɔn de n’aniwa ‘rekyini asase so baabiara,’ na wayɛ krado sɛ “ɔde n’ahoɔden” bedi aboa yɛn. (2 Be. 16:9) Yehowa nim nea yɛrefa mu, na ɔdɔ yɛn. Wugye di sɛ Onyankopɔn bɛma woanya ɔdɔ ne ɔhokafo a wuhia no na ama wo bo atɔ wo yam anaa? Nya awerɛhyem sɛ, bere a ɛsɛ mu no, Onyankopɔn bɛma wo nsa aka nea wuhia no!
Hwɛ yiye na wo ne obi a ɔnsom Yehowa antwe kɔndua koro (Hwɛ nkyekyɛm 10)
MMA WO KOMA MMA NE HO SO
11, 12. (a) Dɛn na Hesekia yɛe a ɛmaa nea ɛwɔ ne koma mu daa adi? (b) Adɛn nti na Onyankopɔn abufuw amma Hesekia so?
11 Nea yebetumi asua afi Hesekia hɔ no, ɛfa koma ho. Bere bi, Onii a ɔhwehwɛ koma mu no maa nea ɛwɔ Hesekia koma mu daa adi. (Kenkan 2 Beresosɛm 32:31.) Bere a yare bi a emu yɛ den bɔɔ Hesekia no, Onyankopɔn maa no sɛnkyerɛnne bi de kyerɛe sɛ ne ho bɛtɔ no. Ná sɛnkyerɛnne no yɛ sunsuma a ɛsan n’akyi. Ɛno nti, Babilon mpanyimfo somaa nkurɔfo ma wobebisaa saa sɛnkyerɛnne no ho asɛm. (2 Ahe. 20:8-13; 2 Be. 32:24) Bere a Yehowa “gyaw” Hesekia no, nea na ɛwɔ ne koma mu daa adi. Hesekia de “n’adekoradan mu nneɛma nyinaa” kyerɛɛ Babilonfo no. Saa nkwaseade a Hesekia yɛe no maa “nea ɛwɔ ne koma mu nyinaa” daa adi.
12 Bible nkyerɛ nea ɛmaa Hesekia koma maa ne ho so. Ɛbɛyɛ sɛ Asiria so nkonim a odii anaa ayaresa a Onyankopɔn ma onyae anwonwakwan so no na ɛma ɔyɛɛ saa anaa? Anaa “ahonyade ne anuonyam pii” a na ɔwɔ no nti na ɔyɛɛ saa? Sɛnea ɛte biara no, esiane sɛ Hesekia koma maa ne ho so nti, Hesekia “yɛɛ bonniayɛ, yiye a wɔyɛɛ no no ho.” Hwɛ awerɛhosɛm! Ɛwom sɛ Hesekia tumi srɛɛ Onyankopɔn kae sɛ ɔde koma a edi mũ na asom no de, nanso bere bi de, wanyɛ nea ɛsɔ Yehowa ani. Akyiri yi, Hesekia “brɛɛ ne ho ase,” enti Onyankopɔn abufuw amma ɔne ne nkurɔfo no so.​—2 Be. 32:25-27; Dw. 138:6.
13, 14. (a) Tebea bɛn mu na Yehowa betumi ‘agyaw yɛn de asɔ yɛn ahwɛ’? (b) Sɛ yɛyɛ adepa bi na afoforo kamfo yɛn a, ɛsɛ sɛ yɛyɛ yɛn ade sɛn?
13 Sɛ yɛkenkan Hesekia asɛm no dwinnwen ho a, mfaso bɛn na yebenya? Kae sɛ, bere a Yehowa dii Senaherib so nkonim na ɔsaa owuyare a ɛbɔɔ Hesekia no, ankyɛ na Hesekia maa ne ho so. Yɛn nso, sɛ yɛyɛ adepa bi a, ebetumi aba sɛ ebia na Yehowa ‘regyaw yɛn de asɔ yɛn ahwɛ’ ama nea ɛwɔ yɛn komam ada adi anaa? Nhwɛso bi ni. Ebia onua bi bɔɔ mmɔden suaa ɔkasa bi yiye, ɛnna ɔkɔmaa ɔkasa no kyerɛɛ nnipadɔm bi. Ɛno nti, nnipa pii kamfoo no wɔ ɔkasa a ɔmae no ho. Onua no bɛyɛ n’ade sɛn wɔ nkamfo a wɔde rema no no ho?
14 Sɛ afoforo kamfo yɛn a, ɛyɛ papa sɛ yɛde asɛm a Yesu kae no bɛyɛ adwuma. Yesu kae sɛ: “Sɛ moyɛ nea wɔahyɛ mo nyinaa wie a, monka sɛ, ‘Yɛyɛ nkoa a mfaso nni yɛn so. Nea ɛsɛ sɛ yɛyɛ ara na yɛayɛ no.’” (Luka 17:10) Ɛha nso, yebetumi asua biribi afi Hesekia asɛm no mu. Nea ɛkyerɛ sɛ Hesekia koma maa ne ho so ne sɛ ‘ɔyɛɛ bonniayɛ, yiye a wɔyɛɛ no no ho.’ Sɛ yedwinnwen nea Onyankopɔn ayɛ ama yɛn ho a, ɛbɛboa yɛn na yɛanna suban bi a Yehowa ani nnye ho adi. Yebetumi aka Yehowa ho asɛm de akyerɛ sɛ yɛn ani sɔ nea wayɛ ama yɛn. Nea enti a ɛsɛ sɛ yɛyɛ saa ne sɛ, ɛyɛ ɔno na ɔde Kyerɛw Kronkron no ne honhom kronkron a ɛboa yɛn no ama yɛn.
SƐ WORESISI GYINAE A, MPERE WO HO
15, 16. Adɛn nti na Yosia hweree Onyankopɔn ahobammɔ ne n’ankasa nkwa?
15 Nea etwa to no, sɛ yɛhwɛ nea ɛtoo Ɔhene Yosia a na ɔyɛ ɔhene pa no a, kɔkɔbɔ bɛn na yebetumi anya afi mu? Momma yɛnhwɛ nea ɛkɔfaa ne nkogudi ne ne wu no bae. (Kenkan 2 Beresosɛm 35:20-22.) Ɛwom sɛ Ɔhene Neko a ofi Egypt no ka kyerɛɛ Yosia sɛ ɔne no nni asɛm biara de, nanso Yosia “kɔe sɛ ɔne” Neko rekɔko. Bible ka sɛ asɛm a Neko kae no, na “efi Onyankopɔn anom.” Sɛ saa a, ɛnde adɛn nti na Yosia kɔe sɛ ɔne no rekɔko? Ɛno de, Bible nka.
16 Nanso, na Yosia bɛyɛ dɛn ahu sɛ asɛm a Neko kae no fi Yehowa hɔ ampa? Ná anka obetumi akobisa Yeremia a na ɔka adiyifo anokwafo no ho no. (2 Be. 35:23, 25) Nanso, kyerɛwtohɔ biara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ Yosia yɛɛ saa. Afei nso, na Neko de n’ani akyerɛ Karkemis. Ná ɔne “ofie foforo” na ɛrekɔko, ɛnyɛ Yerusalem. Bio nso, na Onyankopɔn din ho nni asɛm no mu, efisɛ na Neko ntwaa Yehowa anaa Yehowa nkurɔfo mpoa. Enti Yosia annwene asɛm no ho yiye ansa na ɔne Neko rekɔko. Asuade bi wɔ asɛm yi mu a yebetumi de ayɛ adwuma anaa? Sɛ yehyia ɔhaw bi a, ɛyɛ papa sɛ yɛhwehwɛ nea Yehowa pɛ sɛ yɛyɛ wɔ asɛm no ho.
17. Sɛ yehyia ɔhaw bi a, dɛn na yɛbɛyɛ na yɛanni mfomso bi a ɛte sɛ nea Yosia dii no bi?
17 Sɛ asɛm bi sɔre a, ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Bible nnyinasosɛm ahorow a ɛfa ho na yɛde yɛ adwuma wɔ ɔkwan a ɛfata so. Ɛtɔ mmere bi a, yebetumi ne asafo mu mpanyimfo no akosusuw ho. Ebia nea yenim fa asɛm no ho no, na yɛadi kan asusuw ho ayɛ nhwehwɛmu wɔ yɛn nhoma ahorow mu mpo. Nanso, ebia na Bible nnyinasosɛm foforo bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ yesusuw ho, na asafo mu panyin bi betumi aboa yɛn ama yɛahwehwɛ mu. Nhwɛso bi ni. Onuawa bi nim sɛ ɛsɛ sɛ ɔkɔka asɛmpa no. (Aso. 4:20) Nanso, yɛmfa no sɛ da bi a ɔyɛɛ n’adwene sɛ ɔbɛkɔ asɛnka no, ne kunu a ɔnyɛ Yehowa Dansefo no kae sɛ mma ɔnkɔ asɛnka saa da no. Onuawa no kunu kae sɛ, ɔne ne yere no boom yɛɛ ade akyɛ, na saa da no de ɔpɛ sɛ ɔne no bom yɛ biribi. Ebia onuawa no besusuw Bible mu nsɛm bi a ebetumi aboa no ama wasi gyinae pa ho. Bible mu nsɛm a ebia obesusuw ho no bi ne nea ɛfa Onyankopɔn a yebetie no ho ne ahyɛde a ɛne sɛ yɛnyɛ asuafo no. (Mat. 28:19, 20; Aso. 5:29) Nanso, ehia sɛ ɔsan susuw ahobrɛase a ɛsɛ sɛ ɔyere da no adi kyerɛ ne kunu ne ntease a ɛsɛ sɛ ɔda no adi nso ho. (Efe. 5:22-24; Filip. 4:5) Onuawa no betumi abisa ne ho sɛ, ne kunu no resɔre atia no sɛ ɔremma ɔnkɔ asɛnka koraa, anaasɛ saa da no nko ara na ne kunu no reka sɛ ɔnyɛ biribi foforo? Bere a yɛrebɔ mmɔden sɛ yebenya ahonim pa na yɛayɛ nea Onyankopɔn pɛ no, ɛsɛ sɛ yɛhwɛ yiye na yɛanyɛ ade amma antra so.
MA WO KOMA NNI MŨ BERE NYINAA, NA W’ANI BEGYE
18. Mfaso bɛn na wubetumi anya afi ahene baanan a yɛasusuw wɔn ho wɔ adesua yi mu no hɔ?
18 Esiane sɛ yɛnyɛ pɛ nti, ɛtɔ mmere bi a yɛn nso yebetumi adi mfomso ahorow a ahene baanan a yɛasusuw wɔn ho no dii no bi. (1) Yebetumi de yɛn ho ato nnipa nyansa so bere a yɛn ani nna yɛn ho so. (2) Yebetumi abɔ fekubɔne. (3) Yebetumi ayɛ ahomaso. (4) Yebetumi asisi gyinae a yɛrenni kan nsusuw nea Onyankopɔn pɛ ho. Yehowa hu adepa a ɛwɔ yɛn mu sɛnea ohuu adepa a na ɛwɔ saa ahene baanan no mu no. Wei ma yehu sɛ ne yam ye paa! Yehowa san hu sɛ yɛdɔ no paa, na yɛpɛ sɛ yɛde yɛn koma nyinaa som no. Enti wama yɛn sɛnnahɔ de ayɛ kɔkɔbɔ a ɛbɛboa yɛn na yɛanni mfomso akɛse. Enti momma yennwinnwen Bible mu nsɛm yi ho, na yɛnna Yehowa ase sɛ wama wɔakyerɛw saa nsɛm yi ama yɛn!
Share Share Wode Wo Koma Besi Nea Wɔakyerɛw no So Anaa?
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM March 2017